China Best Price Low Voltage Switchgear GCS Low Voltage Drainage Switchgear Supplier-shengte MOQ 1pcs ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Shengte
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအနိမ့်ဗို့အား Switchgear GCS Low Voltage Drainage Switchgear Supplier-shengte MOQ 1pcs
GCS အနိမ့်ဗို့အားထုတ်ယူနိုင်သော switchgear သည်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံများ၊ ရေနံဓာတုဗေဒဌာနများ၊ စက်ရုံများ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်များနှင့်အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ၊ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်မော်တာထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများကဲ့သို့သင့်တော်သည်။ capacitance လျော်ကြေးငွေစသည်တို့
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ကြီးမားသောရေနံဓာတုစက်ရုံများတွင်မော်တာထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများနှင့်မော်တာထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများကဲ့သို့ပါဝါအသုံးပြုမှုအခါသမယများတွင်ကွန်ပျူတာ interface ၏အထူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
စက်ပစ္စည်းသည်လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀ န်ကြီးဌာန၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀ န်ကြီးဌာန၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ စီးပွားရေး၊ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအနိမ့်ဗို့အားထုတ်ယူခြင်းခလုတ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာအင်တာဖေ့စ်၊ ဗဟိုအာဏာထိန်းချုပ်မှု၊ အဆင်ပြေလုံခြုံမှုထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲပါဝါစျေးကွက်တွင်မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခြင်းကိုအချိန်တိုစေသည်။ ထုတ်ကုန်တွင်ဖောက်ထွင်းနိုင်သောလက္ခဏာများ၊ မြင့်မားသောဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည်၊ ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုနှင့်အပူတည်ငြိမ်မှု၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောလျှပ်စစ်အစီအစဉ်၊ အဆင်ပြေသောပေါင်းစပ်မှု၊ စီးရီး၊ ခိုင်မာသောလက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ ဝတ္ထုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အဆင့်မြင့်ကာကွယ်မှုအဆင့် ၎င်းကိုဗို့အားနိမ့်ထုတ်ယူနိုင်သော switchgear ၏အစားထိုးထုတ်ကုန်အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။
A. ကက်ဘိနက်တွင်ကောင်းမွန်သောခွန်အားနှင့်တောင့်တင်းမှုရှိသည်။ GCS ကက်ဘိနက်သည် 8MF သံမဏိကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏အထူ၊ ပစ္စည်းနှင့်ပုံသဏ္crossန်ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာသည်အခြားကက်ဘိနက်သံမဏိများထက်များစွာပိုကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့် 8MF သံမဏိ၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်တောင့်တင်းမှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
(ခ) အလျားလိုက်ဘတ်စ်ကားများနှင့်ဒေါင်လိုက်ဘတ်စ်ကားများ၏လက်ရှိရေစီးကြောင်းကိုခံနိုင်ရည်သည် ၈၀ kA/1S သို့ရောက်ရှိပြီးအထွတ်အထိပ်သည်အခြား switchgear များထက်မြင့်သော ၁၇၇ kA/0.1 သို့ရောက်ရှိသည်။
C. GCS ကက်ဘိနက်မှရွေးချယ်ထားသော switch ကို customer များလိုအပ်ချက်များအရပြည်တွင်းပြည်ပထုတ်လုပ်သော circuit breakers အမျိုးမျိုးတပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။
D. PC ကက်ဘိနက်အား 1600A အထိခလုတ်သုံးခုတပ်ဆင်နိုင်ပြီး၎င်းအားသိမ်းပိုက်သောဧရိယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစရိတ်များကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ MCC ကက်ဘိနက်ကိုကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်ယူနစ် (၀.၅၊ ၁၊ ၁.၅၊ ၂၊ ၃ ယူနစ်) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ (ယူနစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုသုံးစွဲသူများရွေးချယ်ရန်စံအမျိုးအစားနှင့်စီးပွားရေးအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်သည်။ ) အံဆွဲ၏ဆွဲထုတ်ခြင်း၊ ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပစ်ခြင်းကို Operating System ၏လက်ကိုင်တစ်ခုထဲဖြင့်အားလုံးနားလည်သည်။ အလျားလိုက်ဘတ်စ်ကားကက်ဘိနက်ကိုနောက်တွင်ပြားစေသောကြောင့်အထက်နှင့်အောက်ကေဘယ်နှစ်ခုစလုံးတွင်သုံးနိုင်သောလမ်းကြောင်းများရှိသည်၊ ၎င်းသည်ဟောင်းနွမ်းနေသောကုန်ပစ္စည်းများကိုဗီဒိုအတွင်းမှထုတ်။ ထုတ်။ မရသောပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ ကက်ဘိနက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်ပြီးပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးအာမခံစနစ်ရှိသည်။
ကိရိယာသည် IEC439-1 "Low-voltage switchgear and control equipment", GB7251.1 "Low-voltage switchgear and control equipment", ZBK36001 "Low-voltage ဆုတ်နိုင်သော switchgear" နှင့်အခြားစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
A. အစိုးရအဖွဲ့၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်ခိုင်မာမှု။ GCS ကက်ဘိနက်သည် 8MF သံမဏိကိုအသုံးပြုသည်၊ ၎င်း၏စာရွက်သည်အထူ၊ ပစ္စည်းနှင့်ပုံသဏ္ာန်အပိုင်းအခြားကိုအခြားသေတ္တာအမျိုးအစားသံမဏိပုံစံထက်များစွာပိုကြီးသည်။
B. အချိန်တိုအတွင်းအလျားလိုက် busbar နှင့်ဒေါင်လိုက် busbar သည် 80kA/1S သို့ရောက်ရှိပြီးလက်ရှိအမြင့်ဆုံးခံနိုင်ရည်သည်အခြား switchgear ဗီဒိုများထက်ပိုမြင့်သော 176kA/0.1 သို့ရောက်ရှိသည်။
C. GCS ကက်ဘိနက်ကိုဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များအရပြည်တွင်းပြည်ပထုတ်လုပ်သောအမျိုးမျိုးသော circuit breakers များတပ်ဆင်နိုင်သည်။
D. PC ကက်ဘိနက်ကိုကြမ်းပြင်နေရာလျှော့ချရန်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန် 1600A အောက်သုံးခလုတ်များတပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ MCC ကက်ဘိနက်ကို ၀.၅၊ ၁၊ ၁.၅၊ ၂ နှင့် ၃ ယူနစ် (ကွဲပြားသောလုပ်ဆောင်ချက်ယူနစ် ၅ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ယူနစ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုသုံးစွဲသူများရွေးချယ်ရန်စံအမျိုးအစားနှင့်စီးပွားရေးအမျိုးအစားခွဲထားသည်) ။ အံဆွဲ၏တွန်းထုတ်ခြင်း၊ ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကို operating system ၏လက်ကိုင်တစ်ခုအနေနှင့်သဘောပေါက်သည်။ အလျားလိုက် busbar ကက်ဘိနက်ကိုပြားချထားသောကြောင့်ကေဘယ်အပေါက်သည်ထုတ်ကုန်ဟောင်းများကိုထုတ်။ မရနိုင်သောပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ ကက်ဘိနက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်ပြီးပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးအာမခံစနစ်ရှိသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား V 380
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကြိမ်နှုန်း Hz ၅၀၊ ၆၀
လက်ရှိ A အဆင့်သတ်မှတ်သည် အလျားလိုက်ဘတ်စ်ကားဘား ပေါင် ၄၀၀၀
ဘတ်စ်ကားအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရေတိုလက်ရှိ kA (1S) ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် ၅၀-၈၀
ဘတ်စ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအထွတ်အထိပ်လက်ရှိ kA (0.1S) ခံနိုင်ရည် ၁၀၅、၁၇၆
Rated insulation voltage V ကိုအဆင့်သတ်မှတ်သည် သုံးအဆင့်လေးကြိုးစနစ် ၆၆၀၊ ၁၀၀၀
ဘတ်စ်ကားစနစ် သုံးအဆင့်ငါးဝါယာကြိုးစနစ် A, B, C, PEN
ပါဝါကြိမ်နှုန်းစမ်းသပ်ဗို့အား V (၁ မိနစ်) အဓိကပတ်လမ်း A、 B、 V、 PE、 N
Auxiliary Circuit Nominal Voltage V ဖြစ်သည် အရန်ပတ်လမ်း 2500
အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာအကျယ် x အတိမ် x အမြင့် -၁၁၀-၂၂၀
IP30 နှင့် IP40
ယခင်: စက်ရုံစျေး GGD AC Low Voltage Distribution Cabinet Supplier-shengte